Bogga ugu weynXaaladaha Guud ee Iibinta (GTC)
Shuruudahaan guud ee iibku waxay khuseeyaan dhammaan iibka laga sameeyay bogga Truffes-vip.com.
Websaydhka https://truffes-vip.com waa adeeg:
oo ku taal 2 impasse des Truffières, 24570 Condat Sur Vézère
Goobta URL: https://truffes-vip.com
taleefan: 05 64 49 00 11
Websaydhka 'Truffes-Vip.com' wuxuu iibiyaa badeecooyinka soo socda: Alaabada laga sameeyay qashinka, sanduuqyada, saliidaha saytuunka, khamriga, baakadaha, milixda, iwm.
Macaamilku wuxuu cadeynayaa inuu aqriyey oo aqbalay shuruudaha guud ee iibka kahor intaanu dalban amarkiisa. Xaqiijinta amarka ayaa markaa tilmaamaysa aqbalida xaaladaha guud ee iibka.
Qodobka 1 - Mabaadi'da
Xaaladahan guud waxay muujinayaan dhammaan waajibaadka dhinacyada. Dareenkan, iibsadaha waxaa loo arkaa inuu aqbalayo iyaga oo aan boos celin lahayn.
Shuruudahan guud ee iibku waxay khuseeyaan ka saarida dhamaan shuruudaha kale, iyo gaar ahaan kuwa khuseeya iibka dukaamada ama marinada kale ee loo qaybiyo iyo suuq geynta.
Waxaa laga heli karaa barta internetka ee 'Truffes-vip.com' waxayna ku guuleysan doonaan, halka ay ku habboon tahay, nooc kasta oo kale ama dukumiinti kasta oo iska soo horjeeda.
Iibiyaha iyo iibsaduhu waxay isku raaceen in shuruudahan guud ay si gaar ah u xukumaan xiriirkooda. Iibiyaha ayaa xaq u leh inuu wax ka beddelo xaaladiisa guud waqti ka waqti. Waxay khuseeyaan isla marka ay internetka ka galaan.
Haddii shuruud iib ah ay fashilanto, waxaa loo tixgelin doonaa in lagu xukumo ku dhaqanka ku dhaqanka qaybta iibinta masaafada ee shirkaddoodu xarunteedu tahay Faransiiska.
Shuruudahan guud ee iibku waa ansax ilaa 31/12/2020
Qodobka 2aad - Nuxurka
Ujeedada shuruudahan guud waa in la qeexo xuquuqda iyo waajibaadka dhinacyada sida ku xusan qaabka iibka internetka ee badeecadaha uu iibiyuhu u geeyo iibsadaha, websaydhka Truffes-vip.com.
Shuruudahaani waxay khuseeyaan oo keliya iibsiyada laga sameeyay bogga [Websaydhka magaca] oo si khaas ah loogu soo diro dhulweynaha Faransiiska ama Corsica. U dirid kasta oo ka timaadda waaxyaha Faransiiska iyo dibedda ama dibedda, waa inaad farriin ugu dirtaa cinwaanka emaylkan soo socda: contact@truffes-vip.com
Iibsigani wuxuu khuseeyaa alaabada soo socota: Alaabada laga sameeyay qashinka waaweyn, sanduuqa la dhigay, saliidaha saytuunka, khamriga, maqaarka, milixda, iwm.
Qodobka 3 - Macluumaadka qandaraaska kahor
Iibsaduhu wuxuu qirayaa in lagu wargaliyay, kahor inta uusan amarkiisa galin oo uusan dhameystirin qandaraaska, qaab la aqrin karo oo la fahmi karo, shuruudahan guud ee iibka iyo dhamaan macluumaadka ku taxan qodobka L. 221- 5 ee Xeerka Macaamiisha.
Macluumaadka soo socda ayaa loo diraa iibsadaha qaab cad oo la fahmi karo:
- sifooyinka aasaasiga u ah hantida;
- qiimaha wanaagga iyo / ama habka xisaabinta qiimaha
- iyo, haddii ay khuseyso, dhammaan kharashyada dheeraadka ah ee gaadiidka, dirista ama dirista iyo dhammaan kharashyada kale ee suurtagalka ah ee la bixin karo.
- maqnaanshaha fulin deg deg ah ee heshiiska, taariikhda ama waqtiga kama dambaysta ah ee iibiyuhu qaadayo bixinta wanaagga, qiima kasta oo uu leeyahay;
- macluumaadka la xiriira aqoonsiga iibiyaha, boostadiisa, taleefoonkiisa iyo faahfaahinta xiriirkiisa elektiroonigga ah, iyo waxqabadyadiisa, kuwa la xiriira dammaanadaha sharciga, shaqooyinka ay ka kooban yihiin waxyaabaha dhijitaalka ah iyo, halka ay ku habboon tahay, is dhexgalkeeda, jiritaanka iyo shuruudaha fulinta damaanadaha iyo xaaladaha kale ee qandaraaska.
Qodobka 4 - Amarka
Iibsaduhu wuxuu suurtogal u yahay inuu amarkiisa ku dhigo khadka tooska ah ee internetka iyo foomka halkaas ka muuqda, ee alaab kasta, inta u dhexeysa xaddiga saamiyada la heli karo.
Iibsadaha waxaa lagu wargalin doonaa maqnaanshaha badeecada ama alaabada la dalbaday.
Si amarka loo ansixiyo, iibsaduhu waa inuu aqbalaa, isagoo gujinaya meesha la tilmaamay, shuruudahan guud. Wuxuu sidoo kale yeelan doonaa inuu doorto cinwaanka iyo habka dirista, ugu dambayntiina uu ansaxiyo habka lacag bixinta.
Iibinta waxaa loo tixgelin doonaa mid kama dambeys ah:
- ka dib markaad u dirto iibsadaha xaqiijinta aqbalaadda amarka iibiyuhu iimaylka;
- iyo kadib markuu helo iibiyaha qiimaha buuxa.
Amar kasta wuxuu muujinayaa aqbalaadda qiimaha iyo sharaxaada alaabada la heli karo ee iibka ah. Muran kasta oo ku saabsan qodobkaan wuxuu ku dhici doonaa qaab isweydaarsiga suurtagalka ah iyo dammaanadaha hoos ku xusan.
Xaaladaha qaarkood, oo ay ku jiraan bixinta lacag bixinta, cinwaanka aan sax ahayn ama dhibaato kale oo ku jirta koontada iibsadaha, iibiyaha wuxuu xaq u leeyahay inuu hor istaago amarka iibsadaha illaa inta dhibaatada laga xalinayo.
Su'aal kasta oo laxiriirta dabagalka amar, iibsaduhu waa inuu wacaa taleefankan soo socda: 05 64 49 00 11 (Qiimaha wicitaanka maxalliga ah), maalmaha iyo saacadaha soo socda: Isniinta ilaa Jimcaha 10: 00 / 12 00 iyo 14: 00/17: 00 adigoo emayl ah, ama u soo dir iimayl iibiyaha cinwaanka emaylkan soo socda: contact@truffes-vip.com
Qodobka 5 - Saxeexa elektarooniga ah
Bixinta khadka tooska ah ee lambarka kaarka deynta ee iibsadaha iyo ansaxinta ugu dambeysa ee amarku waxay noqon doonaan caddeynta heshiiska iibsadaha:
- bixinta qaddarka ku habboon foomka dalabka,
- Saxeexid iyo muujinta aqbalaadda dhammaan hawlgallada la qabtay.
Haddii ay dhacdo in si khiyaano ah loo isticmaalo kaarka bangiga, iibsadaha waa la casuumay, sida ugu dhakhsaha badan ee loo isticmaalo isticmaalka, si aad ula xiriirto iibiyaha lambarka taleefanka soo socda: 05 64 49 00 11
Qodobka 6 - Amarka xaqiijinta
Iibiyaha ayaa siinaya iibsadaha nuqul ka mid ah qandaraaska isagoo ku diraya emayl elektiroonig ah.
Qodobka 7 - Caddaynta macaamil ganacsi
Diiwaangelinta kombuyuutarka, oo lagu hayo nidaamyada kombiyuutarka ee iibiyaha iyadoo la raacayo xaalado nabadgelyo oo macquul ah, ayaa loo tixgelin doonaa inay yihiin caddeynta xiriirka, amarrada iyo lacag-bixinta dhinacyada. Diiwaangelinta amarrada iibsiga iyo qaansheegta waxaa lagu fuliyaa qaab dhexdhexaad ah oo la isku halleyn karo oo loo soo saari karo caddeyn ahaan.
Qodobka 8 - Macluumaadka badeecada
Badeecadaha ay xukumaan xaaladahan guud waa kuwa ka muuqda websaydhka iibiyaha oo lagu muujiyey inuu iibiyuhu iibiyey. Waxaa lagu bixiyaa xadka saamiyada la heli karo.
Wax soo saarka ayaa lagu sifeeyay laguna soo bandhigay sida ugu saxsan ee suurtogalka ah. Si kastaba ha noqotee, haddii khaladaad ama dhaafitaan laga yaabo inay ku soo baxeen bandhiggan, iibiyaha mas'uul kama noqon karo.
Sawirada alaabtu maaha qandaraas.
Qodobka 9 - Qiimaha
Iibiyaha ayaa xaq u leh inuu wax ka beddelo qiimahiisa wakhti kasta laakiin wuxuu ballan qaadayaa inuu ku dabaqo sicirka xoog lagu tilmaamay waqtiga amarka, iyadoo ku xiran helitaanka taariikhdaas.
Qiimuhu waa euro. Iyagu ma tixgeliyaan kharashka dirista, qaansheegadka lagu daro, oo la muujiyey kahor ansaxinta amarka. Qiimayaashu waxay tixgelinayaan VAT khuseeya maalinta amarka isbeddel kasta oo ku yimaada heerka VAT khuseeya wuxuu si toos ah uga muuqan doonaa qiimaha badeecadaha ku jira dukaanka internetka.
Haddii mid ama in ka badan canshuuraha ama tabarucaadka, gaar ahaan deegaanka, la doonayo in la abuuro ama wax laga beddelo, kor ama hoos, isbeddelkan waxaa laga yaabaa inuu ka muuqdo qiimaha iibka alaabada.
Qodobka 10aad - Habka loo bixiyo
Waa amar waajib ku ah bixinta, taas oo macnaheedu yahay in dhigista amarku ay ka dhigan tahay lacag bixin iibsadaha.
Si loo bixiyo amarkiisa, iibsaduhu wuxuu leeyahay xulashadiisa dhammaan hababka lacag bixinta ee ay u diyaarisay iibiyuhu kuna qoran yahay websaydhka iibiyaha. Iibsaduhu wuxuu u damaanad qaadayaa iibiyaha inuu haysto rukhsadaha lagama maarmaanka u ah inuu isticmaalo habka lacag bixinta ee uu isagu doortay, markuu ansaxinayo foomka dalabka. Iibiyaha ayaa xaq u leh inuu joojiyo maamul kasta oo amar ah iyo keenis kasta haddii ay dhacdo diidmada oggolaanshaha bixinta kaarka bangiga ee hay'adaha sida rasmiga ah loo aqoonsan yahay ama haddii ay dhacdo bixinta. Iibiyaha ayaa xaq u leh gaar ahaan inuu diido inuu sameeyo ama uu sharfo amar ka yimid iibsadaha aan si buuxda ama qayb ahaan u bixin amar hore ama cidda ay la socoto muranka lacag bixinta. .
Bixinta qiimaha waxaa lagu buuxiyaa maalinta amarka, sida soo socota:
kaarka lacag bixinta iyada oo loo marayo paypal, ama wareejinta bangiga.
Qodobka 11 - Helitaanka Badeecada - Soo Celinta - Xallinta
Marka laga reebo xaaladaha xoog wax ku muquuninta ama inta lagu jiro mudada uu xiran yahay dukaanka internetka oo si cad loogu shaacin doono bogga hoyga ee goobta, waqtiyada maraakiibtu waxay noqon doonaan, xadka saamiyada la heli karo, kuwa hoos ku xusan. Waqtiyada rarku waxay soconayaan laga bilaabo taariikhda diiwaangelinta amarka lagu muujiyey emaylka xaqiijinta amarka.
Gaarsiinta dhulweynaha France iyo Corsica, waqtiga kama dambaysta ah waa 5 maalmood laga bilaabo maalinta ku xigta maalinta iibsaduhu amarkiisa bixiyay, iyadoo la raacayo shuruudaha uu doortay macaamilka markuu dooranayo gaarsiinta markuu dalbanayo khadka tooska ah, iyada oo loo marayo moduleka boxtal. Ugu dambeyn, waqtiga kama dambaysta ah wuxuu noqon doonaa 30 maalmood oo shaqo kadib dhammaadka heshiiska.
Gaarsiinta waaxaha dibedda iyo taritoriyada ama dal kale, shuruudaha gudbinta waxaa lagu qeexi doonaa iibsadaha iyadoo loo eegayo xaalad-kiis.
Haddii ay dhacdo in aan loo hoggaansamin taariikhda keenista lagu heshiiyey ama waqtiga kama dambaysta ah, iibsaduhu waa inuu, ka hor inta uusan jebin heshiiska, ku amrayaa iibiyaha inuu ku fuliyo muddo macquul ah oo dheeri ah.
Maqnaanshaha waxqabadka markuu dhacayo muddadan cusub, iibsaduhu wuxuu si xor ah u joojin karaa heshiiska.
Iibsaduhu waa inuu ku dhammaystiro nidaamyadan isdaba jooga ah warqad diiwaangashan oo leh qirasho rasiid ama qoraal ahaan qaab kale oo waara.
Qandaraaska waxaa loo tixgelin doonaa sida la joojiyay markii uu iibiyuhu helo warqadda ama qoraal ku wargelinaya joojintaas, haddii uusan xirfadluhu ku qaban muddadaas.
Iibsaduhu si kastaba ha ahaatee wuu si dhakhso leh u joojin karaa qandaraaska, haddii taariikhaha ama waqtiyada kama dambaysta ah ee kor lagu arkay ay isaga u noqonayso xaalad lama huraan u ah heshiiska.
Xaaladdan oo kale, marka qandaraaska la joojiyo, iibiyaha waxaa looga baahan yahay inuu dib ugu soo celiyo iibsadaha dhammaan lacagihii la bixiyay, ugu dambayn 14 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda heshiiska la joojiyay.
Haddii ay dhacdo in la waayo badeecada la dalbaday, iibsadaha ayaa lagu wargalin doonaa sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan wuxuuna lahaan doonaa suurtogalnimada inuu kansal gaabiyo amarkiisa. Iibsaduhu wuxuu markaa yeelan doonaa ikhtiyaarka uu ku codsanayo midkood soo celinta lacagta lagu bixiyay 14 maalmood gudahood ugu dambayn ee lacagtooda, ama badeecada badeecada.
Qodobka 12 - Shuruudaha bixinta
Gaarsiinta waxaa loola jeedaa u wareejinta macaamilka lahaanshaha jirka ama xakameynta wanaagga. Wax soo saarka la dalbaday waxaa loo keenayaa iyadoo la raacayo shuruudaha iyo waqtiga kor lagu soo sheegay.
Alaabooyinka waxaa loo keenayaa cinwaanka uu ku tilmaamay iibsadaha foomka dalabka, iibsadaha waa inuu hubiyaa saxnimadiisa. Xirmo kasta oo dib loogu celiyo iibiyaha cinwaanka gudbinta oo khaldan ama aan dhameystirneyn ayaa dib loogala soo baxayaa kharashka iibsadaha. Iibsaduhu wuxuu codsan karaa, markuu codsado, helitaanka qaansheegta cinwaanka biilasha ee maahan cinwaanka geynta, adoo ku ansaxinaya ikhtiyaarka loogu talagalay ujeedkan foomka dalabka.
Haddii iibsaduhu ka maqanyahay maalinta keenista, keenuhu wuxuu ka tagayaa kaarka wicitaanka ee sanduuqa, taas oo u oggolaan doonta baakadka in laga soo ururiyo goobta iyo muddada lagu tilmaamay.
Haddii waqtiga la keenayo, baakadka asalka ah uu waxyeello gaadhay, jeexmay, la furay, iibsaduhu waa inuu markaa hubiyaa xaaladda alaabta. Haddii ay waxyeello soo gaadhay, iibsaduhu waa inuu gabi ahaanba diido baakadka oo uu ku qoraa boos celin ku taal warqadda dirista (xirmada waa la diiday sababtoo ah way furan tahay ama way dhaawacantay).
Iibsaduhu waa inuu ku muujiyaa warqada dirista iyo qaabka keyd gacanta lagu qoray oo uu weheliyo saxiixiisa wixii khalkhal ah ee ku saabsan keenista (waxyeelada, badeecada la la'yahay marka la barbardhigo warqada dirista, xirmada dhaawacan, alaabada jaban, iwm).
Xaqiijintaan waxaa loo tixgeliyaa in la fuliyay mar haddii iibsadaha, ama qof uu isagu idman yahay, uu saxiixo warqadda dirista.
Iibsaduhu waa inuu markaa ku xaqiijiyaa boostada diiwaangashan ee alaab-sidaha ugu dambayn laba maalmood oo shaqo gudahood markii la helo shayga oo loo diro nuqul ka mid ah warqaddan oo fakis ah ama boosta fudud ee loo iibiyuhu ku yaal cinwaanka lagu xusay. xuquuqda sharciga ee goobta.
Haddii alaabtu u baahan tahay in lagu celiyo iibiyaha, waa inay ahaadaan kuwo ku xiran soo celinta dalabka iibiyuhu 14 maalmood gudahood laga bilaabo bixinta. Cabasho kasta oo la sameeyo wixii ka dambeeya muddadan kama dambaysta ah lama aqbali karo. Soo-celinta alaabada waxaa kaliya loo aqbali karaa alaabada xaaladdooda asalka ah (baakadaha, qalabka, tilmaamaha, iwm.).
Qodobka 13 - Khaladaadka bixinta
Iibsaduhu waa inuu la sameeyaa iibiyaha isla maalinta dirista ama ugu dambayn maalinta ugu horreysa ee shaqada ee soo socota ka dib bixinta, sheegasho kasta oo khalad keenis ah iyo / ama u hoggaansamid la'aan noocyada ama tayo ahaan marka la barbar dhigo faahfaahinta foomka dalabka. Cabasho kasta oo la diyaariyo wixii ka dambeeya xilligan waa la diidi doonaa.
Sheegashada waa la sameyn karaa, xulashada iibsadaha:
- lambarka taleefanka: 05 64 49 00 11
- cinwaanka emaylka: contact@truffes-vip.com
Dacwad kasta oo aan lagu samayn si waafaqsan xeerarka kor lagu qeexay iyo muddada xaddidan ee la dejiyey lama xisaabtami karo waxayna ka sii deyn doontaa iibiyaha wax mas'uuliyad ah oo ku saabsan iibsadaha.
Markay helaan cabashada, iibiyuhu wuxuu u qoondeyn doonaa nambarka sarrifka badeecada (sheyada) ay khusayso oo wuxuu ugula xiriiri doonaa iibsadaha iimayl. Isweydaarsiga sheyga wuxuu dhici karaa oo keliya ka dib marka loo qoondeeyo nambarka sarrifka.
Haddii ay dhacdo gudbinta ama qalad sarrifka, badeecad kasta oo la beddelayo ama la soo celinayo waa in lagu soo celiyaa iibiyaha guud ahaan iyo baakidhkeeda asalka ah, iyadoo la diiwaangelinayo Colissimo, cinwaanka soo socda: DELPIT NEGOCE, 2 impasse des truffières 24570 Condat sur Vézère
Kharashka celinta waa mas'uuliyadda iibiyaha.
Qodobka 14 - Dammaanad qaad alaabeed
Dammaanad sharci oo waafaqsan iyo dammaanad sharci oo ka soo baxa cilladaha qarsoon
Truffes-Vip.com wuxuu dammaanad ka qaadayaa isku mid ahaanshaha alaabta qandaraaska, taasoo u oggolaaneysa iibsadaha inuu codsado iyadoo la raacayo dammaanadda sharci ee u hoggaansamida ee ku xusan qodobbada L. 217-4 et seq. Ee Xeerka Macaamiisha ama dammaanad ka qaadista cilladaha ku jira shayga lagu iibiyay macnaha qodobbada 1641 iyo ka dib ee Xeerka Madaniga ah. Haddii ay dhacdo hirgelinta dammaanadda sharciga ee waafaqsanaanta, waxaa la xusuustaa in:
- iibsaduhu wuxuu leeyahay muddo 2 sano ah laga bilaabo marka alaabta la keenayo si uu u dhaqmo;
- iibsaduhu wuxuu kala dooran karaa hagaajinta ama beddelka alaabta, iyadoo la raacayo shuruudaha kharashka ee ku xusan Qodobka L. 217-17 ee Xeerka Macaamiisha;
- iibsaduhu maahan inuu keeno cadeyn ku saabsan iswaafaq la’aanta wanaaga inta lagu jiro 24ka bilood ee la xiriira alaabada cusub, kadib marka la keeno tan wanaagsan.
Intaa waxaa dheer, waxaa la xusuustaa in:
- dammaanadda sharci ee waafaqsanaanta waxay si madax bannaan u khuseysaa dammaanadda ganacsiga ee hoos ku xusan;
- iibsaduhu wuxuu go'aansan karaa inuu hirgeliyo dammaanad ka qaadista cilladaha qarsoon ee waxa lagu iibiyay macnaha qodobka 1641 ee xeerka madaniga ah. Xaaladdan oo kale, wuxuu kala dooran karaa xallinta iibka ama dhimista qiimaha sida ku xusan qodobka 1644 ee xeerka madaniga ah.
Qodobka 15 - Xaqa ka bixitaanka
Codsiga xuquuqda ka noqoshada
Iyadoo la raacayo qodobada Xeerka Macaamiisha, iibsaduhu wuxuu haystaa 14 maalmood laga bilaabo taariikhda dhiibistiisa amarkiisa inuu ku soo celiyo shay kasta oo aan ku habboonayn isaga oo codsada beddelaad ama soo celin aan ciqaab lahayn, marka laga reebo kharashka soo celinta oo weli ah mas'uuliyadda iibsadaha.
Soo celinta waa in lagu sameeyaa xaaladoodii hore oo dhameystirtaa (baakadaha, qalabka, tilmaamaha, iwm.), Gasacadaha aan la furin ama dhalooyinka, taas oo u oggolaanaysa in dib loogu suuq geeyo xaalad cusub, oo ay la socdaan qaansheegadka wax lagu iibsado.
Waxyaabaha dhaawacmay, wasakheysan ama aan dhammaystirnayn dib looma laabo.
Xaqa ka-noqoshada waxaa lagu isticmaali karaa internetka, iyadoo la adeegsanayo foomka ka-noqoshada ee laga heli karo degelkan. Xaaladdan oo kale, ictiraaf rasiid ah oo ku saabsan alaab waarta ayaa isla markiiba lala socodsiinayaa iibsadaha. Qaab kasta oo kale oo cadeyn bixitaan ah waa la aqbalaa. Waa inuu noqdaa mid aan mugdi ku jirin oo muujinaya rabitaanka ka noqoshada.
Haddii ay dhacdo jimicsi xuquuqda ka-noqoshada muddada aan kor ku soo sheegnay, qiimaha badeecada (alaabta) la iibsaday iyo kharashka gudbinta waa la soo celinayaa.
Kharashka soo celinta ayaa mas'uul ka ah iibsadaha.
Isweydaarsiga (iyadoo la raacayo helitaanka) ama magdhowga waxaa lagu sameyn doonaa 5 maalmood gudahood, ugu dambeyntiina, 14 maalmood gudahood laga bilaabo helitaanka iibiyaha alaabada uu soo celiyay iibsadaha gudahood shuruudaha kor ku xusan.
Sida ku xusan qodobka L221-28 ee Xeerka Macaamiisha, xuquuqda ka noqoshada looma adeegsan karo qandaraasyada:
- keenista badeecadaha qiimahoodu ku xiran yahay is beddelka suuqa maaliyadeed ee ka baxsan xakamaynta xirfadlaha oo ay dhici karto inta lagu jiro muddada bixitaanka;
- Bixinta alaabooyinka loo sameeyey qeexitaannada macaamiisha ama si cad loo shaqsiyeeyey;
- keenista badeecadaha mas'uul ka ah inay ka sii daraan ama si dhaqso leh u dhacaan;
- keenista badeecooyin uu macmiilku ka furey ka dib keenista oo aan la soo celin karin sababo la xiriira nadaafadda ama ilaalinta caafimaadka;
- Badeecado, markii la geeyo ka dib iyo dabiicaddooda, aan loo kala soocin karin waxyaabaha kale;
- Bixinta cabitaannada aalkolada ah ee keenistooda dib loo dhigayo in ka badan soddon maalmood oo qiimahoodu ku heshiiyey gabagabada qandaraaska waxay kuxirantahay isbedbeddelka suuqa ee ka baxsan xakamaynta xirfadlaha;
- dayactirka ama shaqada dayactirka in si deg deg ah looga fuliyo guriga macaamilka oo uu si cad u codsado isaga, inta u dhexeysa xadka dayactirka iyo ka shaqeynta daruuriga daruuriga ah ee wax ka qabashada xaaladaha deg degga ah
- Bixinta cajalado maqal ama muuqaal ah ama softiweer kumbuyuutareed markii ay ka faafiyaan macaamilku markuu u keenay;
- Bixinta joornaal, xilli ama joornaal, marka laga reebo qandaraasyada rukunka ee daabacaadan;
- Bixinta waxyaabaha dijitaalka ah ee aan lagu bixin qalab dhexdhexaad ah, fulintiisa ayaa bilaabatay kadib oggolaansho hore oo hore oo macaamilka ah iyo ka-dhaafitaan xaddidan xuquuqdiisa ka-noqoshada.
Qodobka 16aad - Xoog ku khasab
Dhammaan duruufaha ka baxsan xakamaynta dhinacyada ee ka horjoogsanaya waxqabadka xaaladaha caadiga ah ee waajibaadkooda waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin sababo looga reebayo waajibaadka dhinacyada isla markaana keenaya ka joojintooda.
Dhinacyada ku baaqaya duruufaha kor lagu soo sheegay waa inay si deg deg ah ugu wargeliyaan kooxda kale dhacdadooda, iyo sidoo kale maqnaanshahooda.
Dhammaan xaqiiqooyinka ama duruufaha aan la diidi karin, ee ka baxsan dhinacyada, lama saadaalin karo, lama huraan, ka baxsan xakamaynta dhinacyada oo aan laga hortegi karin kan dambe, inkasta oo ay jiraan dadaal kasta oo macquul ah oo macquul ah, waxaa loo tixgelin doonaa xoog ku khasab. Si cad, waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin xoog ku muquunin ama dhacdooyin nasiib darro ah, marka lagu daro kuwa sida caadiga ah ay haystaan ​​garsoorka maxkamadaha Faransiiska iyo maxkamadaha: xannibaadda gaadiidka ama sahayda, dhulgariirrada, dabka, duufaannada, daadadka, hillaac, daminta shabakadaha isgaarsiinta ama dhibaatooyinka u gaarka ah shabakadaha isgaarsiinta ee ka baxsan macaamiisha.
Dhinacyada ayaa isu imaan doona si ay u baaraan saameynta dhacdada waxayna ku heshiin doonaan shuruudaha lagu sii wadi doono fulinta heshiiska. Haddii kiiska xoog ku muquunintu sii socdo in ka badan saddex bilood, xaaladahaas guud waxaa joojin kara qofka dhaawacmay.
Qodobka 17aad - Hantida aqooneed
Waxyaabaha ku jira websaydhka ayaa wali ah hantida iibiyaha, mulkiilaha kaliya ee xuquuqda hantida aqooneed ee ka kooban mawduucan.
Iibsadayaashu way oggol yihiin inayan isticmaalin waxyaabaha ku jira maaddadan; soo saarid kasta oo wadarta ama qayb ka mid ah mawduucan si adag ayaa loo mamnuucay waxayna mas'uul ka tahay inay noqoto dambi been abuur ah.
Qodobka 18aad - Falanqaynta xogta iyo xorriyadda
Xogta shaqsiyeed ee uu bixiyay iibsadaha ayaa lagama maarmaan u ah ka shaqeynta amarkiisa iyo sameynta qaansheegadka.
Waxaa lala socodsiin karaa la-hawlgalayaasha iibiyaha ee mas'uulka ka ah fulinta, ka shaqeynta, maaraynta iyo bixinta amarrada.
Falanqaynta macluumaadka lagu soo gudbiyay bogga Truffes-Vip.com waxay u hoggaansameysaa Xeerarka Ilaalinta Xogta Guud (RGPD) ee dhaqan galay Maajo 25, 2018.
Iibsaduhu wuxuu xaq u leeyahay helitaan joogto ah, wax ka badal, sixid iyo diidmo la xiriirta macluumaadka isaga ku saabsan. Xaqan waxaa lagu dhaqmi karaa iyadoo la raacayo shuruudaha iyo iyadoo la raacayo qaababka lagu qeexay websaydhka Marque Avenue.
Qodobka 19 - Qayb aan ansax ahayn
Haddii mid ama dhowr shuruudood oo ka mid ah shuruudahan guud loo qabto mid aan ansax ahayn ama lagu dhawaaqay sida iyadoo la adeegsanayo sharci, nidaam ama ka dib go'aanka kama dambaysta ee maxkamadda awoodda u leh, shuruudaha kale waxay sii haysan doonaan xooggooda oo dhan. iyo baaxadooda.
Qodobka 20 - Ka tanaasul la’aan
Xaqiiqda ah in labada dhinac midkoodna uusan ka codsanaynin jebinta dhinaca kale ee waajibaadka ku xusan xaaladahan guud looma fasiri karo mustaqbalka inuu yahay ka tanaasulka waajibaadka. suaal
Qodobka 21aad - Ciwaan
Haddii ay adkaato fasiraadda inta u dhexeysa mid ka mid ah cinwaannada ka muuqda madaxa qodobbada, iyo mid ka mid ah qodobbada, cinwaannada ayaa lagu dhawaaqi doonaa inaysan jirin.
Qodobka 22 - Luqadda qandaraaska
Shuruudahaan guud ee iibku waxay ku qoran yihiin Faransiis. Haddii ay dhacdo in loo turjumo hal ama in ka badan oo luqado ajnabi ah, kaliya qoraalka Faransiiska ayaa ka adkaan doona haddii khilaaf yimaado.
Qodobka 23 - Dhexdhexaadinta
Iibsaduhu wuxuu u adeegsan karaa dhexdhexaadin caadi ah, gaar ahaan Guddiga Dhex-dhexaadinta Macaamiisha ama hay'adaha dhexdhexaadinta ee jira, ama qaab kasta oo kale oo lagu xalliyo khilaafaadka (heshiisiin, tusaale ahaan) haddii khilaaf yimaado.
Qodobka 24 - Sharciga lagu dabaqi karo
Xaaladahan guud waxay ku xiran yihiin ku dhaqanka sharciga Faransiiska. Maxkamada awooda leh waa maxkamada degmada ee khilaafaadka qaddarkoodu kayaryahay ama u dhigma € 10000 ama maxkamada degmada ee khilaafaadka qaddarkoodu ka badan yahay € 10000.
Tani waa kiiska xeerarka la taaban karo sida xeerarka qaabka. Haddii ay dhacdo khilaaf ama sheegasho, iibsaduhu wuxuu marka hore la xiriiri doonaa iibiyaha si loo helo xal nabadeed.
Qodobka 25aad - Ilaalinta xogta shakhsiga ah
Xogta shaqsiyadeed ee laga soo ururiyay boggan waa sida soo socota:
Xisaab furitaanka: marka aad abuureyso koontada isticmaalaha, magaciisa, magaciisa koowaad, cinwaanka emaylka; Lambarka taleefanka; cinwaanka;
Xiriir: marka isticmaaluhu ku xirmo websaydhka, diiwaannada dambe, gaar ahaan, magiciisa, magaca koowaad, isku xidhka, isticmaalka, xogta goobta iyo xogta lacagtiisa.
muuqaal: isticmaalka adeegyada laga bixiyo websaydhka ayaa suurtogal ka dhigaya in la dhammaystiro astaan, oo ay ku jiri karaan cinwaan iyo lambar taleefan.
bixinta: iyada oo qayb ka ah bixinta badeecadaha iyo adeegyada lagu bixiyo websaydhka, waxay diiwaangelisaa xogta maaliyadeed ee la xidhiidha koontada bangiga isticmaalaha ama kaarka deynta.
Isgaarsiinta: marka websaydhka loo isticmaalo in lala xiriiro xubnaha kale, xogta ku saabsan isgaarsiinta isticmaalaha si ku meel gaar ah ayaa loo keydinayaa.
Kukiyada: cookies ayaa loo isticmaalaa inay qayb ka yihiin isticmaalka goobta. Isticmaaluhu wuxuu ikhtiyaar u leeyahay inuu ka joojiyo cookies-ka bogagga shabakaddooda biraawsarka.
Adeegsiga xogta shakhsiga ah
Xogta shakhsiga ah ee laga soo ururiyey isticmaaleyaasha waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo adeegyada websaydhka, si loo horumariyo loona ilaaliyo jawi aamin ah. Si gaar ah si gaar ah, isticmaalka waa sida soo socota:
- marin u helidda iyo isticmaalka websaydhka adeegsadaha;
- maareynta hawlgalka iyo tayaynta websaydhka;
- Abaabulka shuruudaha isticmaalka Adeegyada Bixinta;
- U siinta adeegsadaha suurtagalnimada inuu kula xiriiro isticmaaleyaasha kale ee websaydhka;
- shakhsiyeynta adeegyada adoo soo bandhigaya xayeysiisyo ku saleysan taariikhda daalacashada isticmaalaha, sida ku xusan dookhooda
- dirista macluumaadka ganacsiga iyo xayeysiinta, sida ku xusan dookha isticmaalaha.
La wadaagga xogta shakhsiga ah dhinacyada saddexaad
Xogta shaqsiyeed waxaa lala wadaagi karaa shirkadaha dhinac saddexaad xaaladaha soo socda:
- marka isticmaaluhu u adeegsado adeegyada lacag bixinta, hirgelinta adeegyadan, degelku wuxuu xiriir la leeyahay bangiyada saddexaad iyo shirkadaha maaliyadeed ee ay qandaraaska la gashay;
- markuu adeegsaduhu ku faafiyo macluumaadka la heli karo ee dadweynaha meelaha faallooyinka bilaashka ah ee websaydhka;
- marka websaydhadu isticmaasho adeegyada bixiyeyaasha si ay u siiso taageerada isticmaalaha, xayeysiinta iyo adeegyada lacag bixinta. Adeeg bixiyayaashani waxay leeyihiin helitaan xadidan ee macluumaadka isticmaalaha, oo qayb ka ah waxqabadka adeegyadan, waxayna leeyihiin waajibaad qandaraas ah inay u adeegsadaan iyaga oo raacaya qodobbada sharciyada khuseeya ee ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed. shaqaalaha;
- haddii sharcigu u baahan yahay, websaydhku wuxuu gudbin karaa xog si looga jawaabo cabashooyinka ka dhanka ah websaydhka isla markaana loo hoggaansamo habraacyada maamulka iyo sharciga;
- haddii websaydhku ku lug leeyahay isku darka, helitaanka, wareejinta hantida ama dacwadaha kicitaan, waxaa laga yaabaa in loo baahdo in la wareejiyo ama la wadaago dhammaan ama qayb ka mid ah hantideeda, oo ay ku jiraan xogta shakhsiga ah. Xaaladdan oo kale, isticmaaleyaasha waa la ogeysiin doonaa, ka hor inta aan macluumaadka shakhsiyeed loo wareejin dhinac saddexaad.
Amniga iyo sir haynta
Websaydhku wuxuu hirgaliyaa abaabul, farsamo, softiweer iyo tallaabooyin amni oo dijitaal ah oo jirka ah si looga ilaaliyo xogta shakhsiga ah isbeddelka, burburka iyo marin u helidda aan la oggolaan. Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa in internetka uusan ahayn jawi gebi ahaanba ammaan ah oo boggu uusan damaanad qaadi karin amniga gudbinta ama kaydinta macluumaadka internetka.
Hirgelinta xuquuqda isticmaalaha
Marka la adeegsanayo qawaaniinta lagu dabaqi karo xogta shakhsiga ah, isticmaaleyaashu waxay leeyihiin xuquuqahan soo socda, oo ay ku dhaqmi karaan iyagoo ku codsanaya cinwaankooda soo socda: contact@truffes-vip.com
xuquuqda helitaanka: waxay ku dhaqmi karaan xuquuqdooda helitaan, si ay u ogaadaan xogta shaqsiyadeed ee iyaga ku saabsan. Xaaladdan oo kale, ka hor intaan la hirgelin xuquuqdan, websaydhku wuxuu codsan karaa caddaynta aqoonsiga isticmaalaha si loo xaqiijiyo saxnaanshihiisa.
xaquuqda saxitaanka: hadii xogta shakhsiga ah ee shabakadu hayso aysan sax ahayn, waxay codsan karaan cusbooneysiinta macluumaadka.
xuquuqda in la tirtiro xogta: isticmaaleyaashu way codsan karaan tirtirka xogtooda shaqsiyeed, iyadoo la raacayo sharciyada ilaalinta xogta ee khuseeya
xuquuqda xaddidaadda ka shaqeynta: adeegsadayaashu waxay weyddiisan karaan websaydhka inuu yareeyo ka shaqeynta xogta shaqsiyeed si waafaqsan fikradaha ay bixisay GDPR.
xaq u lahaanshaha: waxay codsan karaan in websaydhku siiyo iyaga xogta shakhsiga ah ee la siiyay si loogu gudbiyo degel cusub.
Websaydhku wuxuu xaq u leeyahay inuu ku sameeyo wax ka beddel kasta qodobkan la xiriira ilaalinta xogta shakhsiga ah wakhti kasta. Haddii wax ka beddel lagu sameeyo qodobkan ilaalinta macluumaadka shakhsiga ah, websaydhku wuxuu qaadayaa inuu ku daabaco nooca cusub degelkiisa. Websaydhku wuxuu kaloo ku ogeysiin doonaa isticmaalayaasha wax-ka-beddelka emayl, ugu yaraan 15 maalmood ka hor taariikhda dhaqan-galka. Haddii isticmaaluhu uusan ku raacsaneyn shuruudaha ereyga cusub ee qodobka ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed, wuxuu ikhtiyaar u leeyahay inuu tirtiro xisaabtiisa.
(inuu buuxiyo macaamilka,
oo ku soo dir warqad diiwaangashan oo leh aqoonsiga rasiidka,
ugu badnaan 14 maalmood gudahood ka dib taariikhda la soo gabagabeeyo heshiiska adeegga)
Foomka Ka-noqoshada Wixii ku saabsan dareenka: DELPIT NEGOCE oo ku taal: 2 impasse des truffières 24570 Condat sur Vézère lambarka taleefanka: 0564490011 cinwaanka e-maylka: contact@truffes-vip.com Waxaan halkan idinku ogeysiinayaa ka bixitaankayga qandaraaska la xiriira adeegga, lagu dalbado: ......... Magaca hore iyo kan dambe ee macaamilka: ............... .. Cinwaanka Macaamilka: ............... .. Date: .................. Saxeexa Macaamilka
Qodobka L. 217-4: “Iibiyaha ayaa keena alaabada si waafaqsan heshiiska wuxuuna masuul ka yahay maqnaansho la’aan kasta oo jirta waqtiga keenista.
Waxa kale oo ay ka jawaabaysaa iswaafaq la’aan kasta oo ka timaadda baakadaha, tilmaamaha isku-xidhka ama rakibaadda marka tan lagu soo oogo qandaraaska ama lagu fuliyo mas'uuliyadeeda. ”
Qodobka L. 217-5: "Wanaagu wuxuu u dhigmaa qandaraaska:
1 ° Haddii ay ku habboon tahay isticmaalka sida caadiga ah laga filayo wanaag isku mid ah iyo, halka ay ku habboon tahay:
- hadday u dhiganta tahay sharraxaadda uu iibiyuhu siiyay oo ay leedahay astaamaha kan dambe u soo bandhigay iibsadaha qaab muunad ama moodal ah;
- haddii ay leedahay astaamo uu iibsaduhu si sharci ah u filan karo marka la eego bayaannada dadweynaha ee ka yimid iibiyaha, soo saaraha ama wakiilkiisa, gaar ahaan xayeysiinta ama calaamadeynta;
2 ° Ama haddii ay leedahay astaamo ay ku qeexeen heshiis wada jir ah dhinacyadu ama ay ku habboon tahay adeegsi kasta oo gaar ah oo uu dalbado iibsaduhu, oo loo soo bandhigo iibiyaha oo kan labaadna aqbalay
Qodobka L. 217-6: "Iibiyaha ayaan ku xidhnayn bayaanka dadweynaha ee soo saaraha ama wakiilkiisa haddii la xaqiijiyo inuusan aqoon iyaga oo sharci ahaana uusan ku jirin meel uu ku ogaado".
Qodobka L. 217-7Isweydaarsi la'aanta oo muuqata muddo afar iyo labaatan bilood gudahood laga bilaabo marka alaabta la geeyo ayaa loo malaynayaa inay jiri doonto waqtiga la keenayo, haddii aan si kale loo caddeyn. Iibiyuhu wuu diidi karaa mala-awaalkaas haddii uusan u dhigmin nooca badeecada ama u hoggaansamid la'aanta loo soo jeediyay. "
Qodobka L. 217-8: “Iibsaduhu wuxuu xaq u leeyahay inuu dalbado in badeecaduhu waafaqsan yihiin heshiiska. Si kastaba ha noqotee, uma tartami karo waafaqsanaanta isagoo ku baaqaya cillad uu ogaa ama uusan iska indha tiri karin markii uu qandaraaska ku jiray. Isla sidaas ayaa lagu dhaqmaa marka cilladdu ay asal ahaan ka timaaddo agabkii uu isagu keenay.
Qodobka L. 217-9: "Haddii ay dhacdo iswaafajin la'aanta, iibsadaha ayaa kala dooranaya inta udhaxeysa hagaajinta iyo bedelida tan wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, iibiyaha waxaa laga yaabaa inuusan ku sii socon karin sida uu u xulanayo iibsadaha haddii doorashadan ay ku kacayso kharash ahaan si aan isku dheelitirnaynayn qaab kale, iyadoo la tixgelinayo qiimaha wanaagga ama muhiimadda cilladda. Ka dib wuxuu ku khasbanaan doonaa inuu sii wado, haddii tani aysan macquul ahayn, sida ku xusan habka uusan iibsane. ”
Qodobka L. 217-10: “Haddii dayactirka iyo bedelida wanaagga aysan suurtagal ahayn, iibsaduhu wuu soo celin karaa wanaagga oo dib ayaa loo soo celin karaa ama kan wanaagsan ayuu u haysan karaa oo qayb ka mid ah qiimaha ayaa la soo celin doonaa. Isla ikhtiyaarka ayaa u furan isaga: 1 ° Haddii xalka la codsaday, la soo jeediyay ama la isku raacay iyadoo la adeegsanayo qodobka L. 217-9 laguma fulin karo hal bil gudahood ka dib cabashada iibsadaha; 2 ° Ama haddii xalkaani uusan ahaan karin dhibaato la'aan weyn tan dambe iyadoo la tixgelinayo nooca wanaagga iyo isticmaalka uu doonayo. Xalka iibka si kastaba ha ahaatee lama sheegi karo haddii iswaafaqsigu yar yahay. ”
Qodobka L. 217-11: Qodobbada Qodobbada L. 217-9 iyo L. 217-10 waxaa lagu dabaqayaa iyada oo aan wax qiimo ah ugu fadhin iibsadaha. Qodobadan isku mid ah kama hor istaagayaan bixinta magta.
Qodobka L. 217-12"Tallaabada ka dhalatay la'aanta la'aanta ayaa gaabis ah laba sano ka dib markii alaabta la keenay."
Qodobka L. 217-13: “Qodobada qaybtani kama xayuubinayaan iibsadaha xaqa uu u leeyahay inuu ku dhaqaaqo ficil ka dhashay cilladaha qarsoon maadaama ay ka soo baxday qodobbada 1641 ilaa 1649 ee xeerka madaniga ah ama fal kasta oo kale oo ah heshiis ama qandaraas-dheeri dabiici ah sharcigu aqoonsan yahay. ”
Qodobka L. 217-14: “Tallaabada tallaabada waxaa qaadi kara iibiyaha ugu dambeeya ee ka dhanka ah iibiyeyaasha ama dhexdhexaadiyeyaasha isdaba jooga ah iyo soo saaraha hantida la guuri karo ee la taaban karo, sida ku cad mabaadi'da qaanuunka madaniga ah.
Qodobka L. 217-15: “Dammaanadda ganacsiga waxaa loola jeedaa ballanqaad kasta oo qandaraasle ah oo xirfadle ah oo ku wajahan macaamilka si loogu celiyo lacagta iibka, beddelidda ama hagaajinta wanaagga ama bixinta adeeg kasta oo kale oo la xiriira. wanaagga, marka lagu daro waajibaadkiisa sharci ee ah in la hubiyo waafaqsanaanta kuwa wanaagsan.
Dammaanadda ganacsiga waa mawduuca qandaraas qoran, oo nuqul ka mid ah la siinayo iibsadaha.
Qandaraasku wuxuu qeexayaa waxa ka mid ah dammaanadda, shuruudaha fulinteeda, qiimaheeda, muddadeeda, baaxadda dhul ahaaneed iyo sidoo kale magaca iyo cinwaanka dammaanad qaadaha.
Intaa waxaa sii dheer, waxay si cad oo sax ah u sheegaysaa in, si ka madax banaan dammaanad ganacsi, iibiyuhu uu ku sii xirnaanayo dammaanadda sharci ee u hoggaansanaanta ee ku xusan Qodobbada L. 217-4 illaa L. 217-12 iyo kuwa la xiriira cilladaha ku jira wax la iibiyay, iyadoo la raacayo shuruudaha ku xusan qodobbada 1641 illaa 1648 iyo 2232 ee Xeerka Madaniga ah.
Qodobbada Qodobbada L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 iyo L. 217-16 iyo sidoo kale Qodobka 1641 iyo sadarka koowaad ee qodobka 1648 ee Xeerka Madaniga ah ayaa dib loogu soo saaray iyagoo dhammaystiran qandaraas.
Haddii ay dhacdo in aan loo hoggaansamin qodobbadaas, dammaanadda ayaa wali sii soconaysa. Iibsaduhu xaq buu u leeyahay inuu isticmaalo. ”
Qodobka L. 217-16: “Markuu iibsaduhu ka codsado iibiyaha, inta lagu guda jiro dammaanadda ganacsi ee la siiyay inta lagu gudajiray helitaanka ama dayactirka hantida guurtada ah, dayactir daboolaya dammaanadda, xilli kasta oo dhaqdhaqaaq la'aan ugu yaraan toddobo maalmood ah ayaa lagu darayaa muddada damaanad-qaadku sii socday.
Muddadani waxay ka bilaabmaysaa codsadaha iibsadaha ee faragelinta ama bixinta dayactirka sheyga su'aasha ah, haddii qodobkani uu ku xigo codsiga faragelinta. ”
Xeerka Madaniga ah
Qodobka 1641: “Iibiyaha wuxuu kuxiranyahay damaanada ciladaha qarsoon ee sheyga la iibiyey taas oo ka dhigaysa mid aan u qalmin isticmaalkeeda loogu talo galay, ama yareynaya isticmaalkan aad u badan oo iibsaduhu uusan helin, ama Qiimo hoose ayuu siin lahaa, haddii uu iyaga garan lahaa.
Qodobka 1648: “Ficilka ka dhasha cilladaha qarsoon waa inuu keenaa iibsadaha, laba sano gudahood laga bilaabo daah-furka cilladda. Xaaladda ku xusan qodobka 1642-1, tallaabada waa in la keenaa, iyadoo lagu ciqaabayo la wareegida, hal sano gudahood laga bilaabo taariikhda iibiyaha laga siidayn karo cilado muuqda ama iswaafaq la'aan.